सहयोगी - एक समर्थक। अर्थ र प्रयोग को उदाहरण
सहयोगी - एक वास्तविक एक, तर पनि त्यो भन्दा बढी छ। हामीलाई आज परिभाषा जाँच्न के सहयोगी प्रत्येक अन्य फरक बुझ्न गरौं।
जब सहयोगिहरु छोटो आपूर्ति छन् अब समय छ, तर शायद मान्छे obmelchali गर्छन, र तिनीहरूलाई लागि पछि जान चाहनु छैन। अर्डर वास्तविक मित्र प्राप्त गर्न, हामी क्रांतिकारियों उदाहरण जस्तै साधारण धेरै लागि मान्य केही विचार, हुनुपर्छ। हो, ती सबै भन्दा भाग यूटोपियन लागि हो, तर तिनीहरू sympathizers को ठूलो संख्या थियो। विशेष गरी, को पाठ्यक्रम, चे। आफ्नो अनुहार आज शर्ट मा फैशन देखिन्छ। त्यहाँ धेरै चे छन् थियो उहाँलाई लागि मर्न तयार थिए ती? यो एक कठिन प्रश्न छ, हामीलाई पहिलो त्यहाँ रूसी भाषा को standpoint देखि एक सहकर्मी छ भनेर बुझ्न गरौं। त्यसैले शब्दकोश यसो भन्छ: "भट्टि - एक विश्वसनीय comrade।"
यसलाई सधैं पहिलो पटक को मूल्य बुझेका छैन। यस मामला मा यो शब्द को अर्थ मा यस्तै अध्ययन को वस्तु विस्थापन गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि:
जब दृष्टि समकक्षों, तपाईंले वास्तवमा एसोसिएट छ जो पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तैयार गर्न त सजिलो छैन। यो सिर्फ एक मित्र भन्दा बढी छ - धेरै तरिका गरेर comrade कि स्पष्ट छ।
मित्र भिन्न छन्। केही मान्छे संग बिताउने समय - एउटा अनुकूल सम्बन्ध। अन्यसँग घनिष्ठ कुरा साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल एक भाइ-मा-हतियार कुनै पनि क्षण मा उद्धार हुनेछ। साथीहरूसँग यस्तो विश्वास कहिलेकाहीं छैन, सम्बन्ध साँचो हो भने हुनत, त्यसपछि को पाठ्यक्रम यो एक फरक पार्छ।
एक सहयोगी को सम्बन्ध मा अर्को महत्वपूर्ण कुरा। यो सम्बन्ध सामान्य परीक्षण छ जो। उदाहरणका लागि, त्यहाँ दुई मान्छे हो, र तिनीहरूले एउटा "लडाई" सम्झनाहरु छन्। वैकल्पिक, तिनीहरूले हट स्पट भ्रमण गर्नुपर्छ, तर केही गम्भीर तिनीहरूले एकताबद्ध छन्। र तिनीहरूले प्रत्येक अन्य 120 प्रतिशत भरोसा छ।
साथीहरूसँग, मान्छे फरक ideological मुद्दाहरू छैन सहमत गर्न सकिन्छ, तर यो एक comrade छैन - comrade। यो तीव्र विश्लेषण देखि आषा साथीहरू र सहयोगिहरु, बस कहिलेकाहीं राम्रो समय छ, जो साथीहरू, बीच फरक खाली गर्नेछ।
यो सहयोगिहरु प्राप्त गर्न सम्भव छ?
हो, तर केही अवस्थामा:
हामी उपयुक्त समस्या, ostrosotsialnye अवस्था आवश्यक छ।
हामी सँगी कायर मा साहस हुन छैन आवश्यक छ।
हामी एक मन चाहिन्छ। एक व्यक्ति नजिकै छ भने, यो त्यो प्रशंसक हुनेछ असम्भाव्य छ।
हामी संसारको सुधार गर्न अझ वा कम स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
तपाईंले यी सबै अवस्था पूरा भने, भाइहरू-मा-हतियार को उपस्थिति छैन बचा गर्न सकिएन।
केही जस्तै, तपाईं artificially एक संकट अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ गर्दा गरेको छ रूपमा, उदाहरणका लागि, खलनायक, र तिनीहरूले साथीहरूले र accomplices (अँध्यारो पक्ष हामी विचार गर्दै छन् कि शब्द को लागि एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् छ) देखा, तर यो सबै भन्दा राम्रो विधि छैन। गम्भीर यद्यपि, साथीहरूले प्रत्येक व्यक्ति हुन सक्छ। हामी एउटा कुरा सम्झना हुनु पर्छ: साथी - यो एक मित्र भन्दा बढी छ।
Anatomical संग्रहालय। संसारमा कठोर प्रदर्शन anatomical संग्रहालयहरु
पुरानो रूसी बालिका नाम: विकल्प र आवश्यकता
जीवनको सुनौलो नियम सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कि
वजन लागि पाटी - वजन बढाउनका एउटा सजिलो तरिका
मकै गुच्छे कसरी खाना पकाउनु? हानि र यस विनम्रता को लाभ
"विटामिन सुपरस्ट्रेट" - विटामिन तनाव विरुद्ध
तपाईं कसरी आफ्नो दाँत राम्ररी माझ्छु गर्न थाहा छ?
स्वास्थ्य प्रार्थना Nikolayu Chudotvortsu। बिरामी Nikolayu Chudotvortsu को स्वास्थ्य को लागि प्रार्थना
आफ्नो हात बिछाउने को छत
ग्रिल मा स्वादिष्ट माछा
दबाइ बारेमा सारा सत्य: "Turboslim" वजन गर्छ